မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း မှ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စွမ်းအင်လုပ်ငန်း မှ
အလုပ် 12 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : လူမှုရေးနှင့် လုပ်အားပေး အလုပ်အကိုင်များ
Job Summary (အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အကျဉ်းချုပ်) ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား Physical Education (PE) ကို ဂရုစိုက် သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော သင်ကြားမှုစနစ်များကို အသုံးပြုသင်ကြားပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
Electrical Technician (WMRL)
Maintenance, Installation, electrical fault emergency maintenance and emergency handling, implement 5S work.
Prepare profit & loss statement balance sheet and financial reports. Check revenue & costs, financial commitments. Perform daily taxation work and accounting work and Other job-related duties that may be assigned from time to time.
Business Assistant (HR)
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
We are urgently looking for Business Assistant, HR (Female 1 post) who is in esteem and hard working for Admin & HR Department
ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များ2စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ2စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ2လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 အကြံပေး နှင့် နည်းဗျုဟာပေး အလုပ်အကိုင်များ 1 အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ3အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1
မန္တလေး 1 ရန်ကုန်4မြန်မာပြည်အတွင်း 7
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ2အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 10